နေ့များ: ပြာခြွေခွက် ၂။ အထိုင်များရွေ့ခြင်း
Posted by KZကေ at 18:12
T2A April 24, 2011 at 1:05 PM
"အရင်ရွှေရောင်ရှိတဲ့ ငါးလေးနာမည်ဟာ ၀ါဝါပဲ၊ သူ့အရောင်စိမ်းလာလို့မို့ စိမ်းစိမ်းလို့ကျနော်တို့ပြောင်းမခေါ်ကြတော့ဘူး။ သူဟာတခြားငါးတကောင်အဖြစ်ပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး၊ ၀ါဝါပဲ၊ ပြောင်းသွားတာကသူ့ အရောင်ပဲဖြစ်တယ်။" (ရှင်းတယ်ဗျာ ….သူ.ရဲ.ဗဟိဒ္ဓသွင်ပြင်ပြောင်းသွားရုံနဲ.တော့ သူ.ကို ညွှန်းထားတဲ့အချက်ဟာ ပြောင်းမသွားဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲထင်ပါရဲ…။ မှားနေရင် ပြင်ပေးပါဦးဗျာ။)
"ဒါပေမယ့် Kripke အတွက်ကတော့ ၀ါဝါဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ အရောင်ပြောင်းသွားတဲ့ငါးလေးကြားမှာ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ဆက်ကြည့်လို့ရတဲ့ နားလည်မှုရှိနေတယ်။ ၀ါဝါဟာ ၀ါဝါပဲ ဘာအရောင်ပဲပြောင်းသွားသွား။
Kripke ပြောတာကဒီလို၊ ရှင်လင်းချက်တခု (ချဲ့ပြောရင် ယုံကြည်ချက်တခု) ဟာ အညွှန်းတခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပေး လိုက်တယ်။ နာမည်တခုကို အရာဝထ္ထုတခုနဲ့ တွဲပေးလိုက်တယ်။" (သိပ်မရှင်းပါ ။ ခက်ဆစ်ဖွင့်ပြဖို. လိုနေသလားပဲ ။)
"အမှန်တရားဆိုတာ ယဉ်ကျေးမှုတခုကမွေးထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ခင်ဗျားဘယ်ပေါ်ကိုအခြေခံပြီးရပ်ခံသလဲဆိုတာပေါ်မူတည်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ "(ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ တော်တော်ကြီးကို ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတွေးအခေါ်ပဲဗျာ။ ဒါကတော့ ငါ့ရဲ.ယဉ်ကျေးမှုပဲကွာ....အဲဒီတော့ အဲဒီအတိုင်းပဲ ငါလုပ်လိုက်တယ်"..............
အဲလိုများပြောလိုက် ၊ လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ သေပြီပေါ့ဗျာ
"အင်မတန်ကို လျှပ်ပေါ်လော်လီတဲ့ အတွေးအခေါ်ပါဗျာ"။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတွေးခေါ်ပုံဟာ လွတ်လပ်မှုတော့ အရှိသား ။ Creativity ကောင်းစေတာတော့အမှန်ပဲ ။)
T2A April 24, 2011 at 1:08 PM
"၁၉၆၉ ကျတော့ ခန်းဟာ နှိုင်းယှဉ်မဖော်ပြနိုင်ခြင်းကို ဘာသာဗေဒနဲ့ဆက်စပ်ပြန်တယ်။ မတူတဲ့အထိုင်နှစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ လူတွေဟာ မတူတဲ့ဘာသာစကားကိုပြောကြတယ်။ ဒါကြောင့် အထိုင်တခုမှာရှိနေတဲ့ သိပ္ပံဘာသာစကားကို တခြားအထိုင်တခုမှာဘာသာပြန်ပြီး သုံးဖို့မဖြစ် နိုင်ဘူး လို့ ခန်း ကဆိုတယ်။" (ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံချင်း သို.မဟုတ် ယဉ်ကျေးမှုချင်း မတူတဲ့အတွက် အမှန်တရားနဲ. ပက်သက်တဲ့ သိမြင်မှုဟာ ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်ဖြစ်တယ်လို. ပြောနေတာများလားဗျာ ။ သိပ္ပံပညာနဲ.ပက်သက်ရင်တော့ သုံးလို.ရတယ်မလား ။ ပြောချင်တာက သိပ္ပံပညာမှာ ရှိနေတဲ့ သီအိုရီတို. ၊ သက်သေပြချက်တို.က အမှန်တွေပဲလေ ။ ဟူးးးးးးးးးးးးးမောတယ်…..။)
T2A April 24, 2011 at 1:09 PM
"ကိုပါးနီးကပ်ကျတော့ ကမ္ဘာကိုရွေ့တယ်ပြောယုံ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါဟာ နက္ခတ်ဗေဒနဲ့ရူပဗေဒကိုပုံစံအသစ်နဲ့ပြန်ကြည့်တာ။
ဒီတော့ ဒါကိုအထိုင်နှစ်ခု၊ ကမ္ဘာနှစ်ခု သူ့ယူဆချက်နဲ့သူပဲလို့ပြောလို့ဖြစ်မလား။" (ကိုပါးနီကပ် ကိစ္စကတော့ တမင်ကပ်ပြီးပြောနေသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျ……။ ဒီကိစ္စကကျတော့ Reference Frame ပြောင်းသွားတဲ့ကိစ္စပဲဟာကို…။ သူ.အရင်လူတွေနားလည်ပုံက တစ်မျိုး ။ သူကကျတော့ အမှန်ကိုသိတာကိုး ။ ဒါပေမယ့် တခြားသောသိပ္ပံဆိုင်ရာ သဘောတရားတွေမှာကျတော့ “အမှန် ၊ အမှား” ကိစ္စမဟုတ်ဖူးနော…။ လူသားရဲ. သိမြင်မှုကျယ်ပြန်.လာတာတွေပါ ။ ဥပမာဗျာ……ရူပဗေဒမှာရှိနေတဲ့ စကြာဝဠာနဲ.ဆိုင်တဲ့ သိမြင်မှုတွေနဲ. ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်က သိမြင်မှုတွေလိုပေါ့ ။ နောက်ပိုင်းမှာ ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်ကို သိလာတယ် ….ဒါကြောင့် စကြာဝဠာနဲ. ပက်သက်တဲ့ သိမြင်မှုတွေဟာ မှားသွားပြီလို. ပြောလို.မရဘူးလေ ။ ဒီကိစ္စမှာကျတော့ လူသားရဲ. သိမြင်မှုကျယ်ပြန်.လာတာပဲ ။ ကိုပါးနီးကပ်ကိစ္စကတော့ လိုက်ပြီးကပ်ပြောနေသလိုပဲ ။ အဲဒီကိစ္စတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်ပြီးပြောရင်တော့ ဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေါ့ဗျာ ။)
T2A April 24, 2011 at 1:11 PM
ဟဲဟဲ.........လိုက်ပြီးလေပေါနေတာ ။ အားနေလို.တော့မမှတ်လိုက်နဲ.နော် ။ ဒါတွေက အရေးကြီးတယ်လို.ထင်လို.လိုက်ပြီးလေပေါပေးနေတာ ။ လွယ်မှတ်လို.။ ညနေတိုင်း အင်္ဂလိပ်စာပိုပြီးကျွမ်းကျင်လာအောင် ABC သောက်ပြီးစဉ်းစားထားရတာတွေ။
KZကေ April 25, 2011 at 11:42 PM
T2A April 28, 2011 at 9:10 PM
အင်းးးးးးးးးးးးဒီနေ. ဧပြီ ၂၈ ရက်နေ.နော် .....။ ပို.စ်တင်တာက မတ်လ ၁၉ ရက်နေ.ဆိုတော့ .............။ အင်းးးးးးးးးးးးးး Comment ရေးချင်သူဆိုရင်တော့ ရေးပြီးလောက်ပြီထင်တာပဲ ။ လူတွေက မိမိတို.လောက်မအကြဘူးဆိုတာကို လက်ခံလိုက်စမ်းပါလေ ။ ကိုယ်တွေပဲ အ,နေကြတာဗျ ။ ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်...........ဟဲဟဲ..။
ATN April 29, 2011 at 5:30 PM
တချို့က မဖတ်ရသေးလို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်...
သည်ဘလော့ကို မသိသေးလို့လည်း ဖြစ်နီုင်တယ်...